Siyaasadda iyo Soohdinta Sarkaalka | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home ARRIMAHA SIYAASADDA Siyaasadda iyo Soohdinta Sarkaalka
Golaha Wasiirradu waxa uu maanta magacaabay Taliyaha Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed, Janaraal Maxamed Sheekh Xasan Xaamud iyo Taliyaha Ciidanka Asluubta, Bashiir Maxamed Jaamac.
Waa laba sarkaal aqoon oo u leh amniga, horeyna u soo noqday Taliyayaal ciidan. Waa laba wax bartay oo dhal magaal ah. Waan u hambalyeynayaa. Waxaan Ilaaheey uga baryayaa in uu ku guuuleyo daryeelka ciidanka iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha si sugid amni oo sharciga waafaqsani ay ugu suurta gasho.
Taliyayaasha ciidanku waa in ay ahaadaan qaar aan go’aankoodu ku saleysneyn siyaasad ee ay hagto baahida amniga iyo tan ilaalinta sharciga. Marnaba aan mowqif iyo go’aan siyaasadeed qaadan, marka laga reebo in ay si dimuqraaddi ah codkooda qarsoodi ugu dhiibtaan sida muwaaddin kasta oo kale.
Ciidan waa laga dallici karaa oo siyaasad waa loo gudbi karaa sida Janaraal Diini iyo qaar kale oo badan. Laakiin siyaasadda inta laga soo baxo Janaraal ciidan ma la noqon karaa? Waa su’aal ay u baahan tahay in ay dowladdeennu is weydiiso, xeer ka dejiso, ciidankana ay ku wargeliso.
Midda kale si loo dhowro heybadda iyo anshaxa saraakiisha, mooraalka ciidanka iyo kalsoonida uu shacabku ku qabo ciidanka, waa in la dabraa hammiga siyaasadeed ee sarkaalka. Janaraal xaq waa u leeyahay in uu siyaasadda galo, laakiin horta waa in uu ciidanka ka baxaa isaga oo og inuusan ku soo laaban kari doonin. Waa in ay noqotaa markii ugu dambeysay ee ciidankeenna lagu dhex arki lahaa isaga oo lebbisan.
Waa maxay farriinta ay magacaabistani u direyso sarkaalka waddaniga ah, anshaxa wanaagsan ee howl karka ah ee khibradda leh ee hammiga ku haya in uu maalin ciidanka hoggaamiyo?
Anigu waxaan siyaasi u aqaan xubnaha Baarlamaanka iyo Golaha Wasiirrada ee heer Federaal iyo heer Goboleed, Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada iyo xubinnimada Xisbi Siyaasadeed oo diiwaan gashan.
Previous articleHababka Loola Dagaallo Musuqmaasuqa Maamuleed
Next articleCadaado: Magac iyo Maamuus Lagu Gaaray Midnimo